HomePod: Ihe ọ bụla ị chọrọ ịma banyere ọhụụ ọhụrụ Apple | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Ndị na-ekwu okwu, Ngwa
Mgbe ihe karịrị otu ọnwa gasịrị, ụmụ okorobịa si Cupertino ekwuputala ọkwa ndoputa na ụbọchị mbupute nke HomePod. Na Jenụwarị 26, Apple ga-emeghe oge ndoputa ma ọ gaghị adị ruo Febụwarị 9, mgbe ndị ọrụ mbụ ga-enwe ike bido inwe obi uto HomePod. Ọnụahịa ya: $ 349 gbakwunyere ụtụ.
Dị ka Apple kwupụtara na isi okwu nke o gosipụtara iPhone X, iPhone 8 na iPhone 8 Plus, HomePod ga-amalite na United States, Australia na United Kingdom, atọ n'ime mba ebe Apple na-ekere òkè na ngwaọrụ mkpanaka bụ kasị elu. Ka anyị na-eche ka ọ rute mba anyị, n’isiokwu a anyị gosiri gị ihe niile ị chọrọ ịma gbasara HomePod.
Mba ndị ọzọ HomePod ga-abata ga-abụ France na Germany, ndị ga-enwe ike ịnụ ụtọ HomePod site na mmiri. HomePod adịghị eru n'ahịa iji soro Amazon Echo ma ọ bụ ya na Google Home, ebe ọ na-asọmpi na njikọ ọzọ, njikọ nke ndị ọkà okwu dị mma na njikọta ikuku, ebe anyị nwere ike ịchọta ndị nrụpụta dịka Sonos, Bose ma ọ bụ Bang & Olufsen. N'agbanyeghị na Siri na-achịkwa ya, echiche ahụ na ezigbo uru nke ọkà okwu a adịghị dabere n'iji ya dịka onye inyeaka onwe ya, ahịa na ịrị elu na nke Apple agwụbeghị abanye n'agbanyeghị na ndị ọrụ nwere mmasị na-arịwanye elu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na HomePod ga-eche ihu bụ Google Home Max, onye na-ekwu okwu, nke a ma ọ bụrụ na ọ nwere ọgụgụ isi, sitere na Google nwere ọnụahịa nke 399 dollar na nke ụmụ okorobịa si Mountain View chọrọ ka anyị nwee oke egwu dị egwu dịka onye inyeaka onye anyị na ya ga-arụkọ ọrụ ọnụ dịka iji ekwentị anyị.
1 Na ya igba egbe, ọ ga na-asụ Bekee
2 AppleCare + Ahịa
3 Kwekọrọ n'Ozizi na otutu ọrụ
4 Anaghị achọ Apple Music
5 Nkọwapụta HomePod
6 Kwekọrọ n'Ozizi na HomeKit
7 Ọ bụghị igwe Bluetooth
8 Ngwaọrụ dakọtara na HomePod
9 Ogologo oge ole ka batrị HomePod na-adịru?
10 HomePod agba
Na ya igba egbe, ọ ga na-asụ Bekee
Dị ka ọ bụ omenala na afọ ndị na-adịbeghị anya, Apple chọrọ gbochie HomePod ịghọ ngwaọrụ ịkọ nkọ, na na ọ malitere ịdị na mba ebe ebidoghị atụmatụ ya, yabụ naanị asụsụ atọ mbụ enwere ga-abụ American English, English English na Australian English. A manyere Apple ka ọ were nke a, ọkachasị iji kpochapụ ahịa nke ngwaahịa a na China, otu n'ime mba ebe ihe achọrọ maka ngwaahịa Apple nwere ọtụtụ ndọpụ na ngwaahịa ọhụrụ a ekwesịghị ịgafe ụkpụrụ.
AppleCare + Ahịa
Apple na-enye anyị AppleCare + akwụkwọ ndọtị ndọtị, mmemme nke na-ekwe nkwa anyị nnọchi nke ngwaọrụ ruo ugboro abụọ, ọ bụrụhaala na data ahụ ngwaọrụ ahụ tara ahụhụ, bụ ihe ọghọm. Mmemme a anaghị emetụta mmebi ịchọ mma ma ọ bụrụhaala na HomePod na-aga n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma. AppleCare + ọnụahịa dị na United States bụ $ 39. O di nwute, nkwa AppleCare + adịghị na mpụga United States, yabụ na Spain na mba ndị ọzọ ị ga-edozi AppleCare, mmemme nke dabere na ngwaọrụ Apple anyị nwere, erughị ya oge. .
Kwekọrọ n'Ozizi na otutu ọrụ
Otu n'ime nsogbu ndị ọrụ na-eche ihu na mwepụta nke iPhone X bụ na ID NJ bụ naanị dakọtara na otu onye ọrụ, nke na-egbochi ihe ọ bụla nke ezinụlọ anyị iji ngwaọrụ ahụ n'amaghị koodu mmeghe. N'ịbụ onye HomePod, ọkà okwu kwuru maka ntụrụndụ ezinụlọ, onye enyemaka nke Siri, nwee ike ịmata ndị ọrụ niile bi n’otu ụlọ, ka ndị ezinụlọ anyị ọ bụla wee soro ya na-emekọrịta ihe n’enweghị nsọtụ. Anyị ga-enwe ike iji ya kpọọ oku na-enweghị eriri, ọ dị mma maka mgbe aka anyị ji ọrụ ndị ọzọ dị mkpa nke na-egbochi anyị iso iPhone emekọrịta.
Anaghị achọ Apple Music
N'adịghị ka ihe ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike iche, na ịbụ ngwaọrụ e mere iji gee egwu, ọ dịghị mkpa ka anyị kwụọ ụgwọ maka ndenye aha Apple Music iji nwee ike ịnụ ụtọ HomePod, ebe ọ bụ na ngwaọrụ a na-enye anyị ohere igwu egwu niile anyị nwere na iTunes, ma ọ bụ na anyị bu n'obi ịzụta. Ọ na-enye anyị ohere igwu egwu pọdkastị kachasị amasị anyị yana ọdụ Apple Beats1, ọdụ nke ịge ntị ọ dịghị Apple Music ndenye aha chọrọ.
Ọ bụrụ na ebumnuche anyị bụ ịnụ ụtọ egwu anyị nwere na iTunes, anyị nwere akụkọ ọjọọ, ebe HomePod enweghị ọrụ Homekekọrịta ,lọ, yabụ anyị agaghị enwe ike ịnụ ụtọ egwu echekwara na Mac ma ọ bụ PC anyị site na HomePod, bụrụhaala na anyị nwere ya ebudatara anyị iPhone ma ọ bụ iPad ma mụta nwa ya site na iji airplay ọrụ. Otú ahụ ka ọ dị Spotify, ọrụ na-eduga egwu na ụwa. Ọ bụrụ na anyị ebughị n'uche ịgbanwee gaa na Apple Music, ngwa a ga - enyere anyị aka izipu ọdịnaya nke Spotify site na ọrụ AirPlay ma na-achịkwa playback site na iwu Siri.
N'ime HomePod anyị na-ahụ woofer nke na-ejikọ a omenala ampilifaya mụta nwa a dịgasị iche iche nke miri emi ma ọgaranya bass. Ọ na-eji algorithm dị elu nke na-enyocha egwu na-aga n'ihu na egwu na-ada ụda dị ala maka ụda dị ụtọ, na-ekpuchi ya. Ngwaọrụ a nwere akara ntanetị asaa dị n'akụkụ ngwaọrụ ahụ, nke ọ bụla nwere ampilifaya na transducer ma bụrụ nke a kwadebere iji lekwasị anya na ụda maka njikwa ntụzi aka, na-enye gị ohere ịmepụta echiche nke oghere agakọ, ụda na-agbanwe agbanwe na Nnukwu ntụkwasị obi na ụlọ niile ị nọ n'ime
HomePod na-ejikwa A8 chip (otu ahụ dị na iPhone 6 na iPhone 6 Plus), onye nhazi na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu abụghị nke ọhụrụ na ndị nrụpụta Apple, ebe ọ bụ na ihe nhazi dị ugbu a na iPhone X bụ A11 Bionic . N'ihi usoro ihe a, HomePod nwere ike nyochaa ma ihe amaka na ụda olu nke ụlọ ebe ọ dị, inwe ike ịge anyị ntị site na egwu iji gbanwee mmeputakwa yana ojiji nke ngwaọrụ enyere site na usoro ịkagbu mkpọtụ dị elu.
N'elu ngwaọrụ anyị na-ahụ ihuenyo mmetụ nke anyị nwere ike iji jikwaa playback ngwaọrụ, na mgbakwunye na ịchịkwa olu, ọrụ anyị nwekwara ike ịrụ site na iwu olu. Ekele dịrị AirPlay nke abụọ, airplay 2, anyị nwere ike ijikọ aka jikwaa egwu niile a na-egwu na HomePods niile anyị nwere n'ụlọ anyị, nke anyị nwekwara ike ịnye sistemụ stereo nke anyị ga-eji tinye onwe anyị na egwu anyị ọkacha mmasị.
HomePod nwere akụkụ nke 172 x 142 mm, ibu nke kilogram 2,5, Njikọ Bluetooth 5.0 na Wi-Fi 802.11ac MIMO. Ọ dakọtara na usoro nkwukọrịta ikuku ọhụụ nke Apple AirPlay 2, nke anyị nwere ike ijikwa ọdịyo ahụ na - enweghị ngwaọrụ anyị na otu HomePods ma ọ bụ mekọrịta ha ka ha niile rụọ otu ọdịnaya n'ime ụlọ niile ebe ha nọ.
Kwekọrọ n'Ozizi na HomeKit
Ngwaọrụ akpaaka nke Apple, HomeKit, nwere mkpofu ngwaọrụ ndị dakọtara na ikpo okwu a, ikpo okwu anyị nwere ike ijikwa site na iPhone site na iji ngwa Home, ma ọ bụ site na iwu olu. Iji mee ka mmekọrịta nke HomeKit dị mfe ma ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, na onye mbụ okwu Apple anyị ga - aga nwee ike ịjụ Siri ka gbanyụọ ọkụ, bulie ìsì, gbanye kpo oku, gbanye ntụ oyi ... niile na-enweghị mmekorita nke ahụ na ngwa ma ọ bụ ịkpọ Siri na iPhone ma ọ bụ iPad.
Ọ bụghị igwe Bluetooth
N’agbanyeghi na odi ka igwe okwu Bluetooth, na HomePod ọ bụ ike ga-eji ma ọ bụ jikọọ na ngwaọrụ ọ bụla na-adịghị arụpụtara Apple, n'agbanyeghị inwe Bluetooth 5.0 njikọta. Nanị ụzọ iji kpọtụrụ Apple ngwaahịa bụ site na airplay, yabụ belụsọ na anyị nwere Apple ¨TV ma ọ bụ ngwaahịa Apple ọ bụla ọzọ anyị agaghị enwe ike ijikọ ya na igwe onyonyo anyị, njikwa ma ọ bụ ngwaọrụ gam akporo. Inwe mgbawa Bluetooth 5.0, a ga-eche na ka oge na-aga, na mmelite n'ọdịnihu, Apple ga-emeghe ohere site na Bluetooth na ngwaọrụ a. Ma ọ bụ ọ bụghị. Na Apple ị maghị.
Ngwaọrụ dakọtara na HomePod
Iji nwee obi ụtọ na HomePod, ọ dị mkpa na ngwaọrụ anyị dịkarịa ala a iPhone 5s, ọgbọ nke abụọ iPad mini, ọgbọ mbụ iPad Ikuku, ma ọ bụ ụdị iPad Pro ọ bụla na na ọ na-jisiri dịkarịa ala site na iOS 11.2.5, ma ọ bụrụ na ị izute ndị a chọrọ na i bu n'obi na-azụta HomePod, ihe niile ị ga-eme bụ imelite ọhụrụ version nke iOS ugbu a dị.
Ogologo oge ole ka batrị HomePod na-adịru?
Onweghị ihe. Ọ dịghị ihe kpatara enweghi ya. N'agbanyeghị obere ya na obere ọ ga - enye anyị, HomePod chọrọ njikọ eletriki iji rụọ ọrụ.
HomePod maka ugbu a, ga-ahapụ ya oji na oji. Enweghị atụmatụ ịmalite ọla edo ma ọ bụ Product Red, ọ bụ ezie na Apple nwere ike ịmalite mbipụta pụrụ iche na agba ndị ọzọ n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » HomePod: Ihe ọ bụla ị chọrọ ịma banyere ọkà okwu ọhụrụ nke Apple
Egwuregwu Xbox One Nanị Na-egwu Xbox Game Pass On Launch Day